Waa maxay quasar? Astaamaha, taariikhda iyo muhiimadda | Saadaasha Shabakadda
Jarmal Portillo | 11/05/2021 10:03 | Saadaasha hawada
Waxaan ognahay in koonku aad u weyn yahay ayna jiri karaan walxo badan oo aan la aqoon sida xiddigaha oo tilmaamaya jir samaawiga ah. Waxa kale oo jira noocyo kala duwan oo ah ashyaa shaqsiyadeed xiddigood oo cirka laga heli karo. Kuwaas oo dhan walxaha xiddigiska waxaa ka heli quasar. Waa shayga cilmiga xiddigiska ee ay aqoon yahanno aqoonyahanno ah u aqoonsan yihiin inuu yahay mid ka mid ah xiddigaha ugu iftiinka badan ee ka jira koonkan. Waxay ku saabsan tahay Roger Shimbiraha waxay heli doonaan meel fog oo waxay maamuli karaan inay soosaaraan xaddi aad u fara badan oo tamar iyada oo loo marayo shucaac la mid ah soosaarka xiddigaha.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegaynaa wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato su'aalaha, astaamahiisa iyo muhiimadda uu leeyahay.
2 Taariikhda quasar
3 Guryaha Quasar
4 Halkee ku yaalliin?
Quarsar waa meydadka samada ee ku shaqeeya godadka madow ee aadka u weyn (balaayiin jeer ka weyn qorraxdayada). Waxay u iftiimayaan si aad u dhalaalaya oo dhalaalaya galaxyadoodii qadiimiga ahaa ee iyaga ku jiray, si la yaab leh waxaannu bilownay inaan fahanno iyaga nus qarni ka hor.
Seynisyahannadu waxay rumeysan yihiin in astaamahan adag ay ka soo jeedaan nukleus galactic, oo leh wax ka badan galaktiisa martigelinta Xaqiiqdii, waxaan kaliya ka helnaa quarca galaxies leh godad madow oo aad u sarreeya (xitaa xitaa dhammaan galaxyada godadka madow). Marka maadada samadu ay aad isugu dhowdahay, waxay samaysaa saxeex saxeexan oo kululaada ilaa malaayiin digrii ah soona saaraya shucaac badan.
Jawiga magnetka ee ku xeeran godka madow ayaa sababa diyaaradaha tamarta waxaa lagu sameeyaa jihooyinka ka soo horjeeda (oo la mid ah waxa ku dhaca tamarta pulsar, kaas oo sidoo kale sii deynaya laba jiho oo iska soo horjeedda), kaas oo ku socdaala meel bannaan muddo malaayiin sano ah. In kasta oo iftiinku uusan ka baxsan karin daloolka madow oo siigada iyo gaasku ay ku dhacaan, haddana qurubyada kale waxaa loo dardargeliyaa ku dhowaad xawaaraha iftiinka birlabta awgeed
Hadda waxaan diiradda saari doonnaa astaamaha su'aalaha:
Waxay quudisaa tamarta ay dhalisay iskahorimaadka rabshadaha u dhexeeya arrinta galactic
Waxay ku baxdaa bartamaha galaxyo cusub ka dibna waxay noqota jidh samaaleed aad u dhalaalaya. Waxay xitaa ogaan kartaa balaayiin sano oo iftiin ah.
Iftiinkeeda waxaa keena god weyn oo madow oo ku yaal bartamaha Jidka Milky Way.
Arrinta gaaska ku hareeraysan ayaa ku guuleysatay inay gaarto heerkul aad u sarreeya. Waxaa jiray khilaaf fara badan iyo qalalaase ka dhex jiray.
Waxay leeyihiin heerar sare oo shucaac ah.
Malaayiin jeer bay ka iftiimaan xiddigaha.
Waa inaan dib ugu laabannaa 1930-naadkii, markii Karl Jansky (oo ka mid ahaa hormoodiyayaashii cilmiga xiddigiska casriga ee raadiyaha) uu ogaaday in carqaladeynta joogtada ah ee khadadka taleefanka ee Atlantika ay ka yimaadeen, wax ka badan ama ka yar, kana yimaaddeen Milky Way 1950-yadii, cirbixiyeennada ayaa mar horeba adeegsanayay teleskoobyada raadiyaha si ay u baaraan cirka una adeegsadaan natiijooyinkooda si ay u barbar dhigaan sawirrada cirka.
Sidaa darteed, waxay ogaadeen in qaar ka mid ah ilaha hawada ka baxa ee yar yar aysan haysan ilo u dhigma soosaarka qiiqa nalka muuqda. Si kale haddii loo dhigo, waxay ka heleen isha uu ka baxayo raadiyaha calaamadda raadiyaha, laakiin ma ay helin xiddig ama wax u muuqda in ay tamartaas ku sii daayaan sawirka cirka. Cirbixiyeenyadu waxay walxahaas ugu yeeraan "ilaha korontada ee fiilooyinka" ama "quasars." Ka dib sanado badan oo cilmi baaris ah (oo xitaa waxaa suuragal ah in la caddeeyo suurtagalnimada in ay yihiin nooc ka mid ah wax ka baxa ilbaxnimada shisheeyaha), dadku waxay ogaadeen in ay dhab ahaan yihiin jajabyo la dedejiyay meel u dhow xawaaraha iftiinka.
Waa isha tamarta ee mas'uulka ka ah shucaac tiro iftiin ah, waa god madow oo aad u baaxad weyn iyo foornada gaaska dhalaalaya.
Quasarku wuxuu leeyahay casaan aad u fara badan oo dhulka way ka fog yihiin. In kasta oo ay umuuqdaan kuwo daallan markii lagu arkay telescope-ka, way kala fog yihiin, iyaga oo ka dhigaya walxaha ugu iftiinka badan caalamka. Waxay beddeli karaan iftiinkooda xilliyo kala duwan. Qaarkoodna sidoo kale waxay badali karaan dhalaalka bilaha, toddobaadyada, maalmaha ama saacadaha. Ballaca quasar ee ku beddelaya jaangooyooyinka dhawr toddobaad ma dhaafi karo dhawr toddobaad oo iftiin ah.
Quasar sidoo kale wuxuu leeyahay astaamo badan oo la mid ah sida galaxies firfircoon.Raadintu ma aha shucaac kuleyl ah waxaana lagu arkay diyaaradaha iyo xargaha (sida galaxyada raadiyaha). Quarsar waxaa lagu arki karaa gobollo badan oo ka mid ah korantada elektromagnetic, sida inta jeer ee raadiyaha, infrared, iftiinka muuqda, ultraviolet, Raajo iyo xitaa raajada gamma. Intooda badani waxay ku iftiimaan qaabka tixraaca midabka ultraviolet ee udhow 1216 the Lyman-alpha hydrogen line, laakiin sababo la xiriira isbeddelka casaankooda, barta iftiinka lagu arkay ee infrared-ka u dhow wuxuu gaarayaa 9000Å.
Muhiimadda ay leedahay baaritaanka iyo barashada quasar ayaa ah in saynisyahannadu ay u adeegsan karaan inay ka helaan macluumaad muhiim ah oo ku saabsan sida loo abuuro godka ugu horreeya ee aadka u weyn iyo galaxiisa.
Halkee ku yaalliin?
Inta badan qiyaasta aan helno waa balaayiin sano oo nala mid ah. Maaddaama xitaa haddii ay ku socoto xawaaraha iftiinka, shucaacyadan ay qaadanayaan waqti dheer inay ku faafaan. Barashada walxahan runti waa isku mid sida isticmaalka aaladda waqtiga, sidaas darteed waxaan arki karnaa meydadka cirka kumanaan sano ka hor, sida markii nalku halkaas uga baxsado. Malaayiin sano. In ka badan laba kun oo caan ah, badankood waxay jireen marxaladihii hore ee galaxyadooda. Milky Way waxaa laga yaabaa in loo dabaaldegay maalmihii hore oo ilaa maanta laga aamusay.
Quasars waxay soo baxaan ilaa tirilyan oo volts oo tamar ah, iyagoo dhaafaya dhammaan iftiinka ay soo wada ururiyaan dhammaan xiddigaha Jidka Milky Way. Iyagu waa walxaha ugu ifaya koonka iyo awoodeeda iftiinka leh waa 10 ilaa 100.000 jeer tan Milky Way. Iyagu maahan walxaha kaliya ee leh astaamahan, dhab ahaantii waxay ka mid yihiin koox ka mid ah meydadka samada loo yaqaan firfircoon galactic nuclei, oo ay sidoo kale ku jiraan Seifert galaxies iyo meydadka samada.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto quasar iyo astaamahiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Quasar: astaamaha iyo sifooyinka